ရန်ကုန်ရှိ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်နေသူများကို ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် ဝိုင်းဖွဲ့ကာ အရက် သေစာသောက်စားမူးယစ်သူများကို ပညာပေးကာလကျော်လွန်၍ အရေးယူဆောင်ရွက် မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အများပြည်သူများ စိတ်အေးချမ်းစွာဖြင့် လူမှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူစည်ကားရာ ပန်းခြံများ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊ တံတားများနှင့် လူသွားစင်္ကြံများပေါ်တို့တွင် ဝိုင်းဖွဲ့၍ အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်သူများကို နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့များ၊ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲများမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းကာ ပညာပေးကာလကို သတိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပညာပေးကာလအဖြစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၃ဝ ရက်အထိ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းကာလများတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပဒေ ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကိုးဦး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိမြို့နယ် များမှ ၇၁ ဦးနှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိမြို့နယ်များမှ ၂၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း လူငယ် ၁ဝ၈ ဦးတို့ သည် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် အရက်သေစာသောက်စားနေကြမှု ကြောင့် ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အမှုပေါင်း ၃၉ မှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီတလီအစိုးရ၏ချေးငွေ ပူးပေါင်းထည့်ဝင်မည့် အမျိုးသား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်းအတွက??